Faah faahin:- Qarax ka dhacay guri ku yaalla degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Qarax ka dhacay guri ku yaalla degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho
Waxaa faahfaahin dheeraad ah laga helayaa qarax aad u xoogan oo ka dhacay guri ku yaalla degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho, kaasoo ka dhashay qasaare xoogan.
Warar madax banaan ayaa inoo xaqiijiyay in qaraxa uu ahaa mid lagu dhex diyaarinayay guri ku yaalla degmada Kaaraan, waxaana qaraxaasi ku dhinay ninkii waday oo ka yimid gobolka Sh/hoose iyo sidoo kale canug yar, iyadoona sidoo kale ay ku dhaawacantay laba qof oo kale, halka uu waxyeelo gaarsiiyay guriga.
Ninka qaraxaasi ku geeriyooday oo ahaa ninkii ka dambeyay qaraxa ayaa la sheegayaa in bambooyin iyo aaladaha qaraxyada uu kusoo dhex qariyay jawaanno galeey ku jirto oo laga keenay degmada Qoryooley, iyadoo la tuhunsan yahay inuu ninkan ka tirsanaa ururka Al-shabaab.
Dhinaca kale, dadkii ku dhaawacmay qaraxa ayaa markii dambe loola caray xarun caafimaad oo xaafadda ku taalla, iyadoo haweeney baxsatay oo guriga ku sugneyd la raadinayo, taasoo la rumeysan yahay inay wax ka ogeyd qaraxa, ayna aheyd xaaska ninka dhintay ee qaraxa waday.
Si kastaba ha ahaatee, qaraxan oo si weyn maanta loo hadal haayo ayay hay’adaha ammaanka sheegeen inuu raadkiisa ka yimid gobolka Sh/hoose.
Hay’adda ammaanka ayaa la sheegayaa inay haatan la wareegeen guriga uu qaraxa ka dhacay, inkastoo la waayay dadkii guriga ku sugnaa, kadib markii uu qaraxa halkaasi ka dhacay.
Dhowr jeer hore ayaa qaraxyo ceynkaan oo kale islamarkaaana ay diyaarinayeen rag ka tirsan Al-shabaab ayaa waxay kula kaceen guryo iyo wadooyinka ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya.